Robin's Nest Suite - I-Airbnb
Le ndawo intle yokujonga ulwandle ibekwe kwindawo efanelekileyo kufutshane neSmelt Bay kumazantsi eCortes encotsheni yendlela efileyo kwaye inikezele indawo yokupaka eyaneleyo kunye nomnyango wabucala. Imbono yeentaba zeVancouver Island kunye namanzi ayonwabela ukusuka kwigumbi lokulala kunye nendawo yokuhlala. Hamba uye kwi-cafe kwi-croissant yasekuseni, ukuya echibini laseHague ukuya kuqubha, ukutyelela igadi yaseHollyhock okanye i-Smelt Bay ekufutshane ukuze ubukele ukutshona kwelanga.
Kukho indawo enikezelweyo yokupaka izithuthi ezinobukhulu obahlukeneyo kunye neetreyila zesikhephe nazo. Indawo yokurenta sisiqingatha sekhaya elithandekayo kwaye liziqulathe ngokwalo ngesango labucala kunye nokungena. Igumbi lodaka libonelela ngogcino olukhuselekileyo nolomileyo lweebhayisekile okanye izipholileyo kwaye linesikhenkcezisi sesifuba osisebenzisayo. I-queen bed ngumatrasi okumgangatho ophezulu onamashiti amatsha womqhaphu kwigumbi eliphangaleleyo. Le yisuite esanda kulungiswa enekhitshi eligcweleyo, imbonakalo entle yasentshona kunye nendlwane emnandi yerobhi kunye neentsana zayo phantsi kwedesika egqunyiweyo.
Ifakwe kumazantsi eSiqithi saseCortes kufutshane 'kwidolophu' yaseMansons Landing. Esi sithuba siphezulu kwindlela efileyo kwaye kukuhamba nje imizuzu engama-20 (imizuzu emi-5 yokuqhuba) ukusuka eSmelt Bay, eHollyhock, eLake, naseMansons apho unokuthenga khona izinto ezityiwayo, ufumane ikofu, ube nesidlo sasemini, kwaye wonwabele indawo yokuhlala. imveliso kunye nokunye kwimarike yangoLwesihlanu (ngoLwesihlanu).
Umamkeli othandekayo ngumbhalo nje kude.